Nhau - Iwo Wekupedzisira Akasvibirira Machira Ekuchengetedza Kwako Zuva
Nhema yeBlackout Bofu
Jacquard Bofu Machira
Roller Bofu Mashizha
Vertical Bofu Mashizha
Curtain / Roman Fabrics
Readymade Roller Mapofu
Readymade Vertical Bofu
Readymade Zebra Bofu
Britain Vertical Zvipenga
Iyo Yakanyanya Kunze Bhasiketi Macheka Ekuchengetedza Kwako Zuva
Roller Blind Machira anova ndiyo mafashoni makuru ekudzivirira kwezuva muindasitiri yazvino. Sezvo yayo pamwe nerubatsiro rwekushandisa nyore, elegancy, yakareba nguva yakareba yehupenyu uye zviri nani kukodzera nzvimbo dzakasiyana.
Nekuda kwechinonyanya kudikanwa kwekuchengetedza simba uye kuvanzika, Blackout Roller blinds inonyanya kudikanwa mukushongedzwa kwewindo. Inogona kuvharidzira UV, kudzikira kupisa kusunungurwa kana kuratidza kupenya kwezuva, nekudaro kunogona kutungamira kuita kwakanaka kwesimba rekuchengetedza, izvi zvinobatsira mukudzora envelop.
Blackout Mapofu anonyanya kushandisa muCafe, hofisi, imba, flat, kabhini, uye nzvimbo yekutengesa. Yakareruka kwazvo kuisa nekutsiva.
ETEX dhizaini mikuru mikuru yeblackout roller mapfudzi machira ayo emhando yepamusoro uye huru yekutarisa yepasi kuti ikwane musika unodiwa.
Upamhi: 200-320cm yakafara, sarudzo yakakura yehupamhi inosangana nezvinodiwa zvakasiyana pamisika dzakasiyana. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva ku100% polyester, isu tinoshandisa iyo yepamusoro mhando uye iyo yekunatsa makemikari kuti tishandise, izvi zvinoita kuti hupenyu hurefu uye hwakachengeteka kune hutano.
Kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yemicheka yedu, ETEX ita yedu machena machira muSGS kuongororwa pane Hard Metal, AZO Yemahara, PVC Yemahara.
Kukurumidza Kujeka: 5 giredhi Bvudzi Reya
Tinogonawo kugadzira machira edu eblackout kuva Waterproof, Fire Proof, anti-bacteria, anti-fugus, anti-guruva, anti-ruzha, pearl, sirivheri masitayipi maererano nezvinodiwa nemutengi.
Yedu FR Standard inowanikwa muBS 5869-1980, NFPA701
Yedu yese blackout zvakare inogona DIY mukugadzira mavara matsva sekukosha kwevatengi, chero ruvara rwako runogona kuzikanwa mukugadzirwa kwedu.
ETEX Blackout Roller Blind Mapofu machira emhando yepamusoro pakucheka nekubatika, uku ndiko kupfuma kwedu kwepakati, Isu tinoshandisa iyo kemikari yakatengwa kunze, inopa kuita kwakanaka pakurembera pamachira eblackout roller.
Yedu mutengo inokwikwidza nekuti tinoita nepatinogona napo kudzora mutengo muitiro yega yega uye nekupa mutengi mutengo wakakwana wemachira anonyanya-kuita.
UV Vhiki chiyero: 100%, Blackout Rate: 100%
Chiedza Reflect: 45%, Heat Transfer: 10%
Kubatanidza Machira: Acosterone Acid
Nguva yekutumira: Jul-17-2020
Runhare: +86 510 83391551
Fakisi: +86 510 83391551
Mazwi akakosha B, Mazwi akakosha A,
Iyo Yakanaka Yekunze Bhasiti Mabhachi e Y ...
R + T Nyika Yakatungamira Yekutengesa F ...
Etex Yakakwirira Yemhando Yekudzora Maitiro